ကုလားအရေး စိတ်မအေးနိုင်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကုလားအရေး စိတ်မအေးနိုင်ပါ
Posted by phone_kyaw on Jun 20, 2012 in Copy/Paste | 26 comments
နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျနော့်အနေနဲ့ အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေအပြင် ကုလားကော တရုတ်ကော ရှိတော့….စဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းအကုန်လုံးအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးက အရမ်းကို ဆူညံနေမှ ဒီအိတ်ရှုးကို ကောက်ခါင်ငင်ခါ ပြောတာထက်စာရင် အနာဂတ်အတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစာသင့်တယ်။ ကျနော်တို့ ပထမလက်တလောမြင်နေရတဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတာက မြန်မာပြည်မှာ ကုလားတွေအများကြီး နှစ်ပေါင်းများစွာနေနေကြတယ်။ သူတို့ တွေကို ကျနော်တို့ က တစ်စုံတစ်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကို ပေးမှ ရမယ်။ မင်းတို့ က ဘင်္ဂါလီကုလားဖြစ်တယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပြန်လို့ ဆိုပြီး အတင်းမောင်းထုတ်လို့ လည်း မရဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ က မျိူးဆက်သုံးလေးဆက် မြန်မာပြည်မှာရှင်သန်ခဲ့တာပဲဆိုတော့ သူတို့ နိုင်ငံက နိုင်ငံသားပေးပေးမပေးပေး မြန်မာပြည်ဟာ သူတို့ နိုင်ငံဖြစ်နေပြီ။ ရခိုင်မှာ ကုလားဗမာ အရေးပြီးတော့ တချိူ့ ကုလားတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် ကိုလှေနဲ့ ထွက်ပြေးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကတောင် ပြန်မောင်းထုတ်တာကို ကြည့်ရင် သိသာနိုင်တယ်။ သူတို့ မှာ မြန်မာပြည်ပဲရှိတယ်။
သာဓုပါတော် ..သာဓုပါ ..သာဓုပါ …
အခုလိုလေး ဖတ်လိုက်ရတော့လည်း .. ကျက်သရေကို ရှိနေတာပါပဲ …. ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တခြားနိုင်ငံရောက်လို့ ဘယ်လိုပဲ ဘ၀မေ့မေ့ပါ … နိုင်ငံသား စိတ်ဓါတ်လေးတွေတော့ .. အကြွင်းကျန်ရှိနေစဲပေါ့ … ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ … ဦးနု က ဘယ်လိုပဲ လက်ခံခဲ့ခဲ့ .. အခု အစိုးရက .. ဦးနု အစိုးရခေတ်မှ မဟုတ်တော့တာ … ။ အစိုးရအသစ်တက်တိုင်း စဉ်မျဉ်း ဥပဒေသစ်တွေ ပြင်ဆွဲတာမျိုး ၊ ပြုပြင် တာမျိုး လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား … ။ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ပေါ် လစီအတိုင်းပဲ ဖြစ်သင့်တယ် .. အခုမှ … ဦးနုလာလွမ်းမနေကြနဲ့တော့ပေါ့ … ။
ကဘုန်းကျော် .. ကိုယ်တိုင်ရေးစာဆိုလျှင် … Category ကိုကြည့်ပေးလေ … ။
ပို့စ်က ပြန်ပြီး အက်ဒစ်လုပ်ခွင့် မရသေးဘူးထင်ပါရဲ့
မသိဘူး အိတုံရေ ဘယ်လိုမျိူးခွဲရလဲဆို
ပို့စ်အသစ်စရေးဖို့ဖွင့်ကတည်းက … ညာဘက်ထောင့်မှာ အမျိုးစားလေး ခွဲပေးတာလေး ပါတယ် … အဲ့ဒီမှာ ကလစ်ခြစ်ရုံပဲ …. ။ပို့စ်ရေးတာ တရာကျော်ပြီ .. အခုထိ ဘယ်လိုခွဲလည်း မသိဘူးလားတော် … ။
တည့်နေကြပါလား။ မင်္ဂလာရှိပါ၏။ ဟီဟိ
အမိုက်မဲကြီးမို့ …ဗွေမယူ … ခွင့်လွှတ်ထားပါတယ် အစ်မသဲနုအေးရေ … ။
သူ့ခမျာ .. မုန့်ဟင်းခါး အလွတ်ဆိုတာကိုတောင် … အလွတ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတဲ့ အချိန် …. ဒီလို စာမျိုးရေးထွက်လာတဲ့အတွက် …. ဒီလူ… စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ဆိုတာ အသိမှတ်ပြုလိုက်တာပါ .. အဟိ …. ။ (ငြိမ်နေလို့ သွားစွပြန်ပြီ ခွိခွိ )
တိုင်းရင်းသားဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့် သိချင်ယင်တနိုင်ငံလုံး ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်လိုက်ပါလား..
ကြိုဆိုပါတယ်ကိုဘုန်းကျော်ရေ။ နောက်ပိုစ့်ကျမှတော့စိတ်ပြန်မပြောင်းရဘူးနော်။ ဒီတခါတော့ ကျွန်မတို့ ပြောချင်နေတာတွေကိုကွက်တိပြောသွားလို့ ဘရဗိုပါကိုဘုန်းကျော်။ မှန်ပါတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်ပြီး ဘယ်သူကိုမှအဖေခေါ်စရာမလိုပါဘူး။ လက်ရှိသည်သာအကောင်း ဆုံးပါ။ လက်ရှိကနေ နောက်အကောင်းဆုံးဆိုတာကို ဖန်တီးရမှာ နိုင်ငံသားတိုင်းတာဝန် ပါ။ နောက်ကြောင်းပြန်တမ်းတလွမ်းဆွတ်နေသူတွေကတော့အဲတုန်းကအခွင့်ထူးခံတွေမို့ဆိုတာ သံသယဖြစ် စရာမရှိပါဘူး။
၁။ “ဝထကလသ” တွေ ကိုယ့် အိမ် ကိုယ် မီးရှို့ပြီးနေစရာ မရှိရင် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေမှာ နေပါစေ ။
ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး လုံးဝ မလုပ်ပေးသင့် ။
၂။ ထောက်ပံ့ရေး ရိက္ခာတွေ ကို လူမျိုးအားလုံးမစားသော(ဝက်သားကဲ့သို့) ရိက္ခာ များထောက်ပံ့ပေးပါ ။
၃။ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကို တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းအသွင်ပြောင်းပါ ။
၄။ ဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်ပြီးလျှင် စခန်းအဝင်အထွက် ကို တင်းကြပ် ပြီး လူအရည်အတွက်ကို ကန့်သန့်ပါ ။
စခန်းအတွင်း လူဦးရေ မတိုးစေရန် အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စ ခွင့်မပြုရန် ။
၅။ UNHCR ကဲ့သို့ အဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ဒုက္ခသည်များအား လက်ခံမည့် တတိယနိုင်ငံများသို့ ပို့ပါ ။
ဒီလို နည်းနဲ့ဆို ထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းလေး ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့ ။
ဒီလိုဆိုတော့လဲ ဟုတ်နေပြန်ရော …
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ ကဘုန်းကျော်…
ဒီတစ်ခါ ဖတ်ရတယ် တကယ်ကိုကောင်းတာပဲ ကိုဘုန်းကျော်ရေ ..
ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်း ရေးတကယ်ပါလား ..
အားပေးနေပါတယ် ဆက်ရေးပါ ….
ကဘုန်း ကျော် က တကယ်တော့ အတွေးကောင်း ၊အရေးကောင်း တယောက်ပါ။ တခါတလေတော့ အပြော မတတ် တော့ ဆဲ သလို ဆိုတဲ့ စကားလို ( တချို့ ဥပမာပေးချက်တွေ ကို ဖတ်ပြီးရင် တွန့် သွားရတာကလွဲ လို့) တချို့ ပိုစ့် တွေ မှာ ခံယူချက် ကို သဘောပေါက် လက်ခံ ပေမယ့် ၀င် မမန့် ဖြစ်ခဲ့ ဘူး။ ခုတော့ အလေးအနက် ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။
ကိုဘုန်းကျော်ကြီး အရေးအသားက မိုက်တယ်ဗျို………..
ကောင်းသဗျို့။ ကိုဘုန်းကျော်ကြီးတို့ ကအရေးကောင်းအတွေးကောင်းဗျို့။ အားပေးဖတ်ရှူသွားပါတယ်ဗျာ။
ဇာတိမာန်ကော၊ ဖင်တွေကော၊ BJ ကော ဘောတောင်မချန်ပဲ ရသအမျိုးမျိုးလဲပေးနိုင်ပါရဲ့ :-)
အားပေးပါတယ် ကိုဖုန်းကျော်ရေ။ ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေရေးပေးတဲ့အတွက်ပါ…လက်မကြီးကြီး
အော် နံမည်မှားရေးမိပြန်ပြီ ဆောရီးနော် ကိုဘုန်းကျော်။
လက်မလေးတွေထောင်ပီး စိမ်းစိမ်းစိုစို မြင်ရတာ အလွန်အင်မတန်ကျက်သရေရှိပါဂျောင်း.
၉ချောင်းမြောက် လက်မ ပိုင်ရှင်
ကိုဘုန်းကျော်ကြီးက အမျိုးမျိုးဘဲနော်၊ ၂၇.၀၄.၂၀၁၂ တုန်းက ဒီပိုစ့် http://myanmargazette.net/118162/uncategorized-other/copypaste ကိုရေးထားတုန်းက အခု ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမဖြစ်သေးဘူးနော်။ ကို ဘုန်းကျော်ကြီးက ကြိုသိလို့ ကြိုပြီး လမ်းကြောင်းထားသလိုဘဲ။
ကောင်းတာ အခုမှမဟုတ်ပါ။ အရင်တုန်းကလည်း ကောင်းတယ်။ မိုးရွာရင် ပိုကောင်းတယ်။ အခုတောင်းဖျားနေလို့ မကောင်းနိုင်ဘူးဗျို့ ။ ဒါ့ကြောင့်ဒီစာကို ဖတ်ရတယ်မှတ်ပါ။
ကိုဘုန်းကျော်က ဖျားမှပဲ ပိုစ့်ကောင်းကောင်းဖတ်ရတယ်မှတ်တာပဲ။ အရင်မဖျားခင်တုန်းကတော့ တုတ်တပျက်ဓါးတပျက်ပိုစ့်တွေများသား။ အဲဒီတော့ ကိုဘုန်းကျော်ကို ကျန်းမာပါစေ ဆုတောင်း ပေးရမှာလား အမြဲဖျားနေပါစေဆုတောင်းပေးရမှာလား ဘာမှန်းတောင်မသိတော့ ပါဘူး။
ဒီအရေး အသားတော့ကြိုက်ပီဗျို့ ။
ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့မြန်မာလောဘီရစ်ထ်တွေသတိထားဖို့ က
ခင်ဗျားတို့ လုပ်လေ ပြည်သူလူထုက တင်းလေပဲ။ အဲဒိလိုဖြစ်လေ မြန်မာပြည်ထဲက ကုလားက နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်လေပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ကတော့ ကွန်ပြူတာ
ရှေ့ မှာထိုင်၊ ဟိုအစည်းအဝေးတက် ဒီအစည်းအဝေးတက်ပြီး ရေဒီယိုမှာအာတာက မပင်ပန်းဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ကုလားက ဘာမှမသိပဲ ဒုက္ခရောက်ရတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ အပြစ်မဲ့တဲ့ကုလားတွေတစ်ပုံကြီးပဲ။ ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းလဲ။ သူတို့ ခင်ဗျာ ဘာမသိပဲ
ကုလားလေးတွေကို ပိုက်ပြီး မိခင်ကုလားမကြီးတွေ မိုးထဲရေထဲမှာ ငတ်ပြတ်ပြီးပြေးကြရတာ။ သူတို့ လည်း လူတွေပဲ။ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ကတော့ ကြောင်လျှာသီးလည်မှာဆွဲပြီး ကိုရန်ကျမ်းစာကို ပိုက် ခေါင်းပေါင်းဆောင်းပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း နေနိုင်တယ်။ မိန်းမလည်း လစ်ရစ်လစ်သလို သုံးလေးယောက်ယူနိုင်တယ်။ ရခိုင်းပြည်က ကုလားငမွဲကတော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ ဒီအခြေအနေကို ဒုက္ခထပ်ရောက်အောင် ဆွ မပေးကြပါနဲ့ ဗျာ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ ဟုတ်ပါတယ်။ ရှိပြီးသား တရုတ်၊ ကုလားတွေ အတွက် FRC ဆိုတာပယ်ဖျက်ပြီး နိုင်ငံသားပေးရတော့မှာပါ။ သူတို့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ကိုယ်တွေနဲ့ တသားထဲ ဖြစ်နေပါပြီ။
ထို့အတူ အနောက်ဖက် ကမ်းရိုးတန်းက အပြစ်မဲ့တဲ့ ကုလားတွေ လည်း အများကြီးပါပဲ။
ရှင်ပြောသလိုပဲ ပိုက်ဆံလိုချင်တာတခုထဲနဲ့ နိုင်ငံရေး ရှုပ်ထွေးအောင် လုပ်နေတဲ့သူတွေ လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးမွေးပြီး စိတ်ကောင်းလေး ရှိကြရင်ကောင်းမှာပါ။
ဘာသာရေး ၊ လူမျိူးရေး ပြသာနာများမြင်ရ ကြားရရင် အလွန်စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။ စစ်မှန်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေတခုနဲ့ လိုက်နာနိုင် လိုက်နာတတ်တဲ့သူတွေ ရှိရင် ဒီပြသာနာ အတန်ငယ်လျော့ပါးကောင်းပါတယ်။
ဒီတခါ ရေးတဲ့စာကို အလွန်သဘောကျပါတယ်။ ရှင်လည်း အတော်အမျိုးချစ်တဲ့သူပဲနော်။
I didn’t read any your post because of your previous writing. I liked the post head line and
I entered the post. And then, I disappointed to see your name but I continued to read your post.
It is good. We are same to fight the Sawkalars.
ကျွန်တော်က menber အသစ်ပါ။ Post အကောင်းလေးတွေဖတ်ရတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။နောက်လဲဖတ် နိူင်ရင်အရမ်းကောင်း မှာပဲ။
ဒီအခွင့်အရေးရဲ့.. အသီးအပွင့်ကိုလည်း… ခံစားခဲ့ရတယ်မှတ်ပါတယ်..
ကိုယ့်ရဲ့စာ.. အတွေးတွေကို.. လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတန်းနဲ့.. ပြန်ညှိကြည့်ဖို့ပဲ..
အပြော ကြမ်းပေမဲ့ အကို့ ပို့(စ) တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဂေဇက် ဖွင့်တာနဲ့ အကို့ပို့(စ) ကိုအရင် ရှာတယ်၊အားပေးနေပါတယ်၊ မိသားစု နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ!